5 အကောင်းဆုံးဥရောပမြို့တော်ခရီးသွားဖြင့်ရထား | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5အကောင်းဆုံးဥရောပမြို့တော်ခရီးသွားဖြင့်ရထား
အချိန်နောက်ဆုံးတော့ရောက်လာပြီ – သင်ရုံတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရပြီးပြီရှိမရှိ, သင့်ရဲ့နှစ်စဉ်အားလပ်ရက်ထွက်သည်ဦးတည်နေကြတယ်, သို့မဟုတ်မြေယာခရီးသွား၏သှေးဆောငျလွဲချော်မရနိုင်သည်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ, သငျသညျရထားခရီးသွားဥရောပရွေးချယ်ပါတယ်. ဒါဟာစိတ်ကူးယဉ်အယူအဆင်, နှစ်ပေါင်းကာလကိုတစ်လျှောက်လုံးထောင်ပေါင်းများစွာအားဖြင့်ခရီးထွက်မယ့်ခရီး. ဒါဟာအစလုံးဝမြားမြားသနိုင်ပါတယ်. ဥရောပက၎င်း၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရထားလမ်းဆက်သွယ်မှုများအတွက်လူသိများသည်. စျေးပေါဒေသခံလက်မှတ်တွေကနေတိုက်ကြီး-spanning အီးယူရထားလမ်း pass မှ, တစ်နေ့ချင်းညချင်းအပေါ်ခုန်မှာရောက်လာရန်လွယ်ကူရဲ့ သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာ နောက်တစ်နေ့နံနက်, သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်စွန့်စားမှုအဘို့အဆင်သင့်.
သင်တို့မူကားအဘယ်မှာရှိသွားသင့်? ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်သို့မဟုတ်သင့်ဒသမင်ရှိမရှိ, ရရှိနိုင်ရထား၏သက်သက်အသံအတိုးအကျယ်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်, ရှုပ်ထွေးမှုများ, နှင့်ထွက်ပျောက်ဆုံး၏စုစုပေါင်းကြောက်ရွံ့ခြင်း. စိုးရိမ်မရ – ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ဒီမှာပုံးတစ်ပုံးစာရင်းကောက်ယူပြီးပြီ5ရထားသွားဖို့အကောင်းဆုံးဥရောပမြို့တော်. ထိုင်ပါ, တက် buckle, နှင့်ပြင်သစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးသော baguettes များအတွက်အခန်းကကယ်တင်, ကျွန်တော်တစ်ဦးစီးနင်းအပေါ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့.
1. အကောင်းဆုံးဥရောပမြို့တော်ခရီးသွားဖြင့်ရထား: ပဲရစ်, ပြင်သစ်
ဂတိတော်ရှိသည်အတိုင်း, ကျနော်တို့လုံးလုံးလြားလြားဒီခရီးကိုစတင်ဖွင့်, ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးနှင့်နာမည်ကြီးရင်ခုန်စရာမြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းအတွက်ရပ်တန့်နှင့်အတူ. ပဲရစ်န်းကျင်ကိုအကောင်းဆုံးရထားလမ်းဆက်သွယ်မှုအချို့ရှိပါတယ်, ရထားဟာမြို့လယ်တစ်လျှောက်လုံးအပြေးနှင့်အတူ, ဒါကြောင့်သင်နှင့်ဝေးနေတဲ့ဘူတာမှဘယ်တော့မှင်. ပဲရစ်လုပ်ဖို့အမှုအရာနှင့်ပြည့်စုံသည်, သငျသညျမွို့တျောဘဝတစ်ဦးအကြောင်းတစေ့တစောင်းရဖို့အနည်းဆုံးသုံးရက်ဒီမှာနေဖို့လိုခငျြပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်.
က stop Louvre Mona Lisa ကိုမှာ peek ဘို့ဒါမှမဟုတ် Arc de Triomphe တက်ပြီးအားဖြင့်သူတို့အား glutes လေ့ကျင့်ခန်း. အဆိုပါရိုင်းအပေါ်တစ်ဦးညစာခရုဇ်ခံစားကြည့်ပါ, အခြို့သောပြင်သစ်ဖက်ရှင်ဆိုင်များမှတစ်ဦးအလည်အပတ်ပေးဆောင်, and take in the gleaming Eiffel Tower as it comes to life in the evenings.
ဒါပေါ့, ပဲရစ်က၎င်း၏မြို့လယ်ထက်ပို. အဆိုပါမြှပ်နှံမြို့တော်သန်းနှစ်ခုကျော်လူတွေကိုမူလနေရာဖြစ်သည်, အရာနည်းလမ်းသင်အမှန်တကယ်ကကမ်းလှမ်းမှုဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်အရာကို၏မျက်နှာပြင်ကုပ်ခြစ်ခြင်းမရှိဘဲကဒီမှာရက်သတ္တပတ်သုံးဖြုန်းနိုင်. တစ်နေ့ကိုပိုတငျး Alexandre III ကိုမှာအလုံးအရင်းထဲကနေခရီးစဉ်နှင့်ဗာဆိုင်းမှဦးခေါင်းများအတွက်ထွက်ပြေးဖို့, ဘယ်မှာ တော်ဝင်နန်းတော် ဆဲ 1700 ရဲ့နောက်ပိုင်း၎င်း၏အခန်းအလွတ်ပေမယ့်အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောစိုးစံ. နေ့လက်မှတ်တွေပဲ€ 20 ဖြစ်ကြောင်းနှင့်နန်းတော်မှ entry ကိုပါဝင်သည်, ဥယျာဉ်များ, ပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးပဲ. ပိုတောင်ကောင်းသွားပြီ, နန်းတော်မှတိုက်ရိုက်မြို့လယ်ကနေ run ရထား, အရာရှိတစ်ဦးလေပြေလာပြီစေသည်. ဒါဟာအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်တရားဝင်ရထားခရီးဘို့ငါတို့အကောင်းဆုံးဥရောပမြို့တော်၏ပဲရစ်တဦးတည်းက.
2. လန်ဒန်, ဗြိတိန်နိုင်ငံ
ငါ၏အပုဂ္ဂိုလ်ရေးတစ်ခုမှာ အကြိုက်ဆုံးမြို့ကြီးများ ပဲရစ်မုသာစကားနှင့်တစ်ဦးမျှသာနှစ်နာရီယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏မြို့တော်: လန်ဒန်. ယဉ်ကျေးမှု၏ဤအရည်ပျော်အိုးအားလုံးထံမှ whopping ကိုးလူဦးရေသန်းမှနေရာဖြစ်သည်အသက်တာ၏သွားလာ. posh ချယ်လ်ဆီးထံမှဝိညာဉ်တော်သည် Soho မှ, သင်သည်သင်၏ပါတီရှိလူတိုင်းအတွက်လှုပ်ရှားမှုများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်. ရှိတ်စပီးယားရဲ့ကမ္ဘာလုံးကျော်ဦးတည်ရှေ့တော်၌ထိုနောက်ဆုံးပေါ်ဂီတ၏ဖမ်းတစ်ဦးနှင့် Shard မှာသင့်ရဲ့ညဥ့်ပြီးစီး, ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ရှိအမြင့်ဆုံးမျှော်စင်.
သငျသညျဤမြို့ကိုမှတဆင့်မြန်မြန်ချင်မည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အချိန်အညီစီစဉ်. သင်ဦးတည်နေပဲဖြစ်ဖြစ် ဟယ်ရီပေါ်တာစတူဒီယို (မြို့လယ်ကနေတစ်နာရီ), သို့မဟုတ်ရိုးရိုးလန်ဒန်၏မျှော်စင်ကဲ့သို့အဓိကအထင်ကရအဆောက်အအတွက်တာ, စိန့်. ပေါလုရဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, Westminster Abbey, Big Ben က, ဒါမှမဟုတ်လန်ဒန်မျက်လုံး, လန်ဒန်မြို့ရှိကုန်တိုင်းမိနစ်အဘယ်သူ၏အင်ပါယာတစ်ချိန်ကကမ္ဘာကြီးကိုသရုပ်ဆောင်တိုင်းပြည်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါ Eurostar မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားရုံကျော်နှစ်နာရီအတွက်လန်ဒန်စင်တာမှပဲရစ်မြို့ကနေသင်တို့ကိုယူ, အရာနည်းလမ်းသငျသညျလျော့နည်းအချိန်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်အချိန်ပိုမို Adventures ဖြုန်းပါလိမ့်မယ်. ထို့ကြောင့်, ကျနော်တို့ရထားလန်ဒန်ခရီးသွားဖို့အကောင်းဆုံးဥရောပမြို့တော်နောက်ထပ်ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားပါ.
3. အကောင်းဆုံးဥရောပမြို့တော်ခရီးသွားဖြင့်ရထား: အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်
ယင်း၏တူးမြောင်းများနှင့်စက်ဘီး-မှီခိုလူဦးရေအဘို့အကျော်ကြား, အမ်စတာဒမ်အဆိုပါနယ်သာလန်ရဲ့မြို့တော်အဖြစ်ထွန်းလင်း. တစ်မူထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ, အမ်စတာဒမ်ဥရောပမြို့တော်အကြားတစ်ဦးကိုရှင်းရှင်းချစ်စရာကောင်းမြို့နှင့်တစ်ဦး standout ဖြစ်ပါသည်. ပဲရစ်ကနေရထားသုံးနာရီကြာရှည်နှင့်အမ်စတာဒမ် Centraal မှာသငျသညျသှေ, တမြို့လုံး၏စိတ်နှလုံးထဲမှာတည်ရှိပါတယ်.
Bols ကော့တေး၏အိမ်ဦးတည်ရှေ့တော်၌ထို Van Gogh ပြတိုက်အတွက်ယူနိုင်ရန် Museumplein မှဦးခေါင်း & Genèveအတွေ့အကြုံ, အရာသည်၎င်း၏အရသာခန်းထဲမှာကော့တေးသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများပါဝင်သည်.
ခရုဇ်ဖို့တူးမြောင်းကိုမေ့လျော့မနေပါနဲ့, ဖြစ်စေ. သင်မြို့တော်ရဲ့ပြည်သူ့စက်လှေတဦးပေါ်ကိုတစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံခရီးစဉ်သို့မဟုတ်-hop ယူရှိမရှိ, သငျသညျကိုရေထဲကနေတစ်ဖွဲ့လုံးအသစ်ကအမြင်အရလိမ့်မယ်. စက်လှေများနှင့်စက်ဘီး၎င်း၏ propensity နေသော်လည်း, အမ်စတာဒမ်မြန်နှုန်းမြင့်သံလမ်းမှတဆင့်ဥရောပကိုကျော်အားလုံးအနေဖြင့်အလွယ်တကူဖြစ်ပါသည်, ဒီရထားခရီးသွားများအတွက်အကောင်းဆုံးဥရောပမြို့တော်များအတွက်အခြားထိပ်တန်းပြိုင်ဘက်အောင်.
4. ဘာလင်, ဂျာမနီ
ဂျာမန်လိမ္မာပါးနပ်ဖို့တစ်ဦးကသေတမ်းစာ, ဘာလင်မြို့စည်းလုံးညီညွတ်မှုအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်လေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်. ဘာလင်တံတိုင်းအားဖြင့်နှစ်ခုအတွက် split, ဒီမြို့တော်မှသာသူ့ရဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုအတွက်ပြန် 1989 အရှေ့ဘက်တွင်ကွန်မြူနစ်အစိုးရပြိုကွဲအောက်ပါ. ထိုကတည်းက, ဒါကြောင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အတူပေါက်ကွဲနှင့်နေအိမ်ကောင်းစွာကျော်နှစ်ခုကိုလူဦးရေသန်းမှယခု. ဒါဟာအပြည့်အဝဖွင့် ယာဉ်ဘီယာ ဘား, ပြတိုက်, နံရံနှင့်ဖီတီပန်းချီအကြွင်းအကျန်.
တိုင်းပြည်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၏ဗဟိုအဖြစ်, ဘာလင်တစ်ဦးမဖြစ်မနေ-အလည်အပတ်ခရီးဖြစ်ပါတယ်. သင်တစ်ဦးအော်ပရာ၏ပုံစံအတွက်သန့်စင်ပြီးဖျော်ဖြေရေးရှာနေသို့မဟုတ်ဥရောပအတွက် hippest သရဲခြောက်သောအချို့ထိမှန်ခြင်းငှါရှာကြံနေပဲဖြစ်ဖြစ်, ဘာလင်လွဲချော်ခံရဖို့မဟုတ်ပါ.
ကအမ်စတာဒမ်ကနေဒီနေရာကိုရဖို့ရန်သင့်အားအနည်းဆုံးခြောက်နာရီကိုယူပါမယ်သော်လည်း, တစ်နေ့လျှင်မျိုးစုံရထားရှိပါတယ်, အရာနည်းလမ်းသငျသညျရောက်ရှိမည်သင့်ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဇယားသတ်မှတ်နိုင်သည်.
5. အကောင်းဆုံးဥရောပမြို့တော်ခရီးသွားဖြင့်ရထား: ပရာ့ဂ်, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
အနောက်တိုင်းဥရောပမြို့တော်ကနေကွဲပြား, ပရာ့ဂ်အရှေ့ဥရောပမှာရှိတဲ့ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏အရင်းအနှီးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးဗဟိုဥရောပမြို့ကြီးများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ကမ်ဘာပျေါမှာအကျော်ကြားဆုံးစာကြည့်တိုက်တမူလစာမျက်နှာ, အဆိုပါ Klementium, ပရာ့ဂ်တိုင်းထောင့်ပတ်လည်မှာယင်း၏ယဉ်ကျေးမှုကိုရည်ညွှန်းပြသ. အဆိုပါအာကာသနာရီသွားရောက်ကြည့်ရှု, ကမ်ဘာပျေါမှာအသက်အကြီးဆုံးတဲ့ operating နာရီ. ဟောငျးမြို့ရင်ပြင်တဝိုက်တစ်အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်ယူပါ, ဘယ်မှာ cobblestone လမ်းများ နှင့် pedestrianized လမ်းကြောင်းသင်သည်စိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲလှည့်လည်နာရီပေါင်းများစွာနိုင်ပါတယ်ဆိုလို.
ပရာ့ဂ်အခြားမြို့များနှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရထားလင့်များဂုဏ်ယူ, လေးယောက်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲနာရီဘာလင်ကနေခရီးအချိန်အပါအဝင်. ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်မီမြို့တော်ရဲ့သမိုင်းကိုစုပ်ယူနိုင်ရန်ဤနေရာတွင်ရပ်တန့် သင့်ရဲ့ခရီး ဥရောပ၏ကျန်တစ်လျှောက်လုံး.
ဥရောပသည်ကျယ်ပြန့်ပြီးမတူညီသောရှုခင်းဖြစ်သည်။ ပြည်ထောင်စုသည်ရထားဖြင့်သွားရန်ယခင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်ဟုဆိုလိုသည်. သင်၏အချိန်ပေါ်ဤအကြောင်းသမိုင်းဝင်မြို့တော်မှခရီးမှ borderless နိုင်ငံတွေ၏အားသာချက်ကိုယူ. လေဆိပ်နှင့်၎င်း၏လူအစုအဝေးနှင့်အလွန်အမင်းလေယာဉ်အစားအစာ၏ခေါင်းကိုက် Skip နှင့်ခရီးသွားတစ်ဦးရထားကိုသုံးပါ. သငျသညျဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်တစ်ဦးဒေသဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းခုန်ဒါမှမဟုတ်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းများအတွက်အနည်းငယ်အပိုဖြုန်းရှိမရှိ, သင်ရထားလမ်းခရီးကိုခံစားမယ်, ရှုခင်း, နှင့်တစ်ခုလုံးအများကြီးပို.
အကြှနျုပျတို့သညျကြှနျတျောတို့ခရီးသွားအကြံပေးချက်များနှင့်ဖုံးလွှမ်းတယ်ပါပြီ. အခုတော့တချို့ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်ဖို့အချိန်င်! တစ်ဦးကရထား Save ရထားလက်မှတ်ဝယ်ဖို့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 အကောင်းဆုံးဥရောပမြို့တော်ခရီးသွားဖြင့်ရထား” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropean-capitals-travel-train%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
မြို့တော် capitals europeantravel europetrains eurotrip လန်ဒန် ရထားခရီးသွား travelfrance travelgermany netရာဝတီ